Fil d'actualités du 21/03/2018
21/03/2018 - 17:00 : BAOLINA KITRA: Araka ny vaovao farany, dia afaka ny hilalao ihany i Abel Anicet rahalina taorian'ny fahitana ny fizahana IRM (Immagérie par Résonance Magnétique).
21/03/2018 - 14:00 : FAHASALAMANA: Ny 2 aprily izao no andro iraisam-pirenena momba ny aretina “autisme”. Ampahafantarina ny volana aprily izao ny momba io aretina io.
21/03/2018 - 13:30 : BAOLINA KITRA: mety tsy hilalao i Abel Anicet androany mandritra ny fifanandrinan'ny Barean'i Madagasikara sy ny ekipam-pirenen'i Togo satria nisy ratra nahazo azy.
21/03/2018 - 13:00 : ANTENIMIERAM-PIRENENA: Aorian'ny fetin'ny paska no mety hanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana.
21/03/2018 - 12:30 : TARANJA BASIKETY: Noho ny antony tsy miankina amin'ny Ligy dia mihemotra amin'ny daty izay ho lazaina amin'ny manaraka ny Topondakan'Analamanga FIBA 3X3, izay tokony ho atao ny 24 sy 25 martsa ho avy izao.
21/03/2018 - 12:00 : FITATERANA: Manambana hitokona ny zotra mampitohy an'Antananarivo sy Arivonimamo ny zoma 23 martsa izao noho tsy fankasitrahany ny famindrana azy ireo eny Andohatapenaka.
21/03/2018 - 11:30 : IVATO: Mikasa hampiditra koperativa vaovao hifaninana amin’ireo koperativa efa misy ny kaominina. Efa misy ny fivoriana iarahan’ny tompon’andraikitry ny kaominina sy ireo koperativa vaovao.
21/03/2018 - 11:00 : AMBANIDIA: Fiara iray niloko mainty nisy nanafika androany maraina. Olona 4 nilaza ho polisy nanao fanamiana sivily no nambanana basy ny tao anatiny, ary naka ny vola tamin'ny harona plastika miloko mainty misy vola.
21/03/2018 - 10:30 : ANTENIMIERAM-PIRENENA: Hifarana anio ny fivoriana tsy ara-potoana saika handaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana, izay hodinihina amin’ny fivoriana tsy ara-potoana faha-3 satria tsy tratra.
21/03/2018 - 10:15 : 21 MARTSA: Andro iraisam-pirenena ho an’ny ala ny andro anio, ka isan'ny mila ezaka be amin'ny fiarovana azy ny eto Madagasikara noho ny famotehana sesilany.
Archive du 20170729
Mamy Rakotoarivelo Maty nitifi-tena
Nodimandry omaly zoma 28 jolay filohan’ny kongresin’ny tetezamita teo aloha Mamy Rakotoarivelo.
Tabera Randriamanantsoa Nampiongana mpitondra ny sakantsakana teto Madagasikara
Matoam-baovao hatreto ny fandavan’ny prefektioran’Antananarivo ny fankalazana malalaka ny faha-15 taona niorenan’ny antoko Tiako I Madagasikara ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Antoko Tiako I Madagasikara Manaja lalàna fa tsy manaiky lembenana
Nivory teny Faravohitra ny birao politikan'ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) sy ny mpitarika omaly zoma 28 jolay 2017, notarihin’ny filohany Ravalomanana Marc.
Fomba fanoherana eto Madagasikara Lojika, hoy ny pasitera Mailhol
Nilaza ny fahitany ny raharaham-pirenena ankehitriny indray ny filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy, ny pasitera Mailhol, omaly, tetsy amin’ny foibeny etsy Isotry.
Antoko TAMAMI Miandrandra governemanta iraisana
Fotoana izao handraisan’ny filoham-pirenena sy ny rehetra fanapahan-kevitra hentitra hitsinjovana ny ho avin’ny taranaka faramandimby,
Mamy Rakotoarivelo Nahavita be teo amin’ny firenena
Manampahaizana manokana momba ny fikirakirana sy ny fanamarinana ara-bola na “Expert comptable” i Mamy Rakotoarivelo.
Filoham-pirenena mivady Miliba any Nosy be indray ?
Any Nosy Be ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady amin’izao fotoana izao.
Fiompiana omby teny Ambolokandrina Tsy neken’ny kaominina intsony
Namoahan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra didim-pitondra ireo fianakaviana mpiompy omby eny Ambolokandrina ka tsy afaka manohy ny asa fiompiany intsony.
« Carrefour de la formation des métiers et de l’emploi » Mahasarika olona marobe tokoa
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly tetsy amin’ny Alliance Française Andavamamba haharitra roa andro ilay “ Carrefour de la formation des métiers et de l’emploi” karakarain’izy ireo.
Familiana Mitsitsy Ho fantatra tsy ho ela izay hibata ny fandresena ho an’Antananarivo
Andro vitsy monja sisa dia ho fantatra izay ho mpandresy amin’ilay hetsika familiana mitsitsy, karakarain’ny tobim-pivarotan-tsolika Shell, eo anivon’ny orinasa Vivo Energy.
Mahagaga ihany raha ny eo anivon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao no mamerimberina matetika fa tsy fotoanan’ny fifanaratsiana intsony izao.
Lozam-pifamoivoizana teny Ivato 1 maty, 7 naratra mafy
Olona 1 maty ary 7 naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina niseho teny Antanetibe Ivato, akaikin’ny lalana mivily any amin’ny Hotely Paon d’Or ny alin’ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany.
Aretina Hépatite B Mandripaka any ambanivohitra
5,4% no tahan’ireo mitondra ny otrikaretina hepatite B ety an-tanàn-dehibe.
Fizaham-pahasalamana eny Analakely Natao hanampiana ny rehetra
Hetsika ara-pahasalamana maro no tanterahin’ny fikambanana “Club Ominsports Avaratranjoma” etsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely nanomboka omaly.
FLSH sy DEGS -Ankatso Efa-bolana tsy nandray vatsim-pianarana
Velon-taraina sy mimenomenona noho ny tsy mbola naharaisan’izy ireo vatsim-pianarana efa ho efa-bolana ny mpianatra ao amin’ny Sampana Haisoratra sy ny DEGS eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.